BVC 5 år - andra språk - 1177
Hälsobesök på BVC vid 5 år - somaliska
BVC: 5 sano
Hälsobesök på BVC vid 5 år - somaliskaThe content concerns Västra Götaland
Marka uu ilmuhu jiro 5 sano waxaa lala kulmi doonaa kalkaalisada caafimaadka. Waxaa kulanka booqashada si wadajir ah uga hadli doonaa arimo khuseeya xaalada caafimaad ee ilmaha iyo koritaankiisa, sida uu yahay ilmuhu muddada uu ku suganyahay dugsiga xanaanada carruurta, arimo ku saabsan ciyaarta iyo in uu la caweeyo dadka kale. Waxaa kale oo la tix raaci doonaa waxyaabihii laga hadley kulanadii hor.
Waa la miisaami miisaan ilmha isla mrakaana waa la cabiraa, mararka qaarkood aragga ilmaha ayaa xitaa la fiiriyaa. Carruur badan waxaa ay door bidaan in ay sii ogaadaan waxyabaha dhici doona. Sidaa aawadeed waxaa haboon in aad u sii diyaariso ilmaha adiga uga uga sheekeynaya waxyaabaha dhici doona isla markaana tusaya sawirada muujinaya waxyaabahaas ee hoos ku xusan.
Kulanka booqashada waxaa la siin doona talaalka lidka ku ah gawracatada, teetanada, xiiqdheerta, dabeysha. Inta badan waxaa talaalka la iska siiyaa gacanta. Marka la siinayo talaalka waxaa haboon in uu ilmuhu ku fadhiyo dhabta waalidkiisa isla markaana lagu mashquuliyo wax kale, tusaale ahaan alaabta ay carruurtu ku ciyaarto si uusan u dareemin xanuunka talaalka. Waxaa kula gudboon ka waalid ahaan in aad ilmahaaga kala hadsho sida uu wax u rabo. Ka waalid ahaan waxaa tahay xasiloonida ilmahaaga. Haddii shaki kaa galo talaalka ama aad welwesho ka hor talaalka waxaa aad la hadli kartaa kalkaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC.
Tani waa booqashadii kuugu danbeysey ee aad ku iman doonto rugta daryeelka caafimaadka BVC. Haddii aad aad u baahantahay in aad na soo booqato marar badan ka hor inta aanad bilaabin dugsiga waxbarashada waad na soo booqan kartaa. Carruurta aan bilaabin fasalka barbaarinta (förskoleklass) mar ay jiraan lix sano, waxaa lagu marti qaadi doonaa in ay marar kale soo booqdaan rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC.
Kalkaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa dugsiga waxbarasha ee uu ilmuhu bilaabi doontid ayaa la wareegi doonta mas’uuliyda daryeelka caafimaadka ilmahaaga marka uu bilaabo fasalka barbaarinta (förskoleklass). Marka aad timaadan kulanka booqashada waxaa aad si wadajir u go’aamin doontaataan waxyaabaha ku saabsan ilmahaaga ee kalkaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa dugsiga waxbarashada ay u baahantahay in ay ka ogaato ilmahaaga. Nuqul mid ah warqadaha daryeelka caafimaadka ilmaha (barnhälsovårdsjournalen) ee yaala rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka ayaa loo diri doonaa dugsiga waxbarasha ka dib markaad bixiso oggolaansho.
U diyaar garow booqashada adiga oo si wadajir ah ula fiirinaya ilmaha sawirada muujinaya waxyaabaha ay booqashada dhaci doona
Ku soo dhawoow kulanka mcaafimaadka marka ilmuhu jiro 5 sano ee ka dhici doona rugta daryeelka caafimaadka!
Ku socota ilmaha:
Hadda waxa aad ogaan doontaa waxyaabaha dhici doona muddada lagu gudo jiro booqashada aad ku timid rugta daryeelka caafimaadka BVC, marka aad jirto afar sano. Carruurta oo dhan waxaa ay sameeyaa waxyaabo isku mid ah. Waxaa aad muddo yar oo kaaban aad ka hadli doontaa sida ay tahay xaaladaada caafimaad iyo waxyaabaha aad jeceshahay in aad sameyso. Maxaad jeceshahay in aad ciyaarto?
Ku socota qofka weyn:
Si wadajir ah ula fiiri ilmahaaga sawirada ka hor inta aanad noogu iman booqashada rugta daryeelka caafinaadka dhalaanka BVC. Waxaa fiican in adiga iyo ilmaha labadiinuba aad ogaataan waxa dhici doona isla markaana aad u diyaar garowdaan. Ilmahaagu waxaa uu sameyn doonaa waxyaabo kala duwan si ay kalkaalisada.
Waxaa fiican in aad soo qaadato buuga caafimaadka marka aad imanayso kulanka booqashada
Mararka qaarkood waxaa dhici karta in wax yar la sugo. Qolka sugitaan ayaad ku ciyaari kartaan muddada aad sugeyso.
Waxaa aad la kulmi doontaan kalkaaliso caafimaad
Waxaa aad la kulmi doontaa kalkaaliso caafimaad. Waad wada hadli doontaan isla markaana waad wada ciyaari doontaan.
Waxaa aad la kulmi doontaan kalkaaliso caafimaad, taas oo fiirin doona sida uu ilmuhu kobcayo, sida uu u hadlayo iyo sida uu wax u fahmayo.
Muddo yar oo kooban baad ka wada hadli doontaa arimo ku saabsan xaaladaada caafimaad iyo waxyaabaha aad jeceshahey in aad sameyso
Adiga iyo ilmahaaga ayaa si wadajir ah uga hadli doona xaalada caafimaad ee ilmahaaga iyo haddii aad qabto wax su’aalo ah.
Iska bixi dharka
Marka lagu miisaamayo waxaa loo baahanyahy in aad iska bixiso dharka. Looma baahna in aad iska saarto kalsoonka.
Waxaa la baadhi doonaa ilamaha isaga oo xidhan kalsoon kaliya.
Miisaan iyo cabir
Miisaanka jidhkaagu intuu dhanyahay? Waxaa sawirka kaaga muuqda miisaan. Waxaa lagaa rabaa in aad miisaanka ku dul joogsato muddo yar oo kooban si ay kalkaalisada caafimaadku u miisaanto miisaanka jidhkaaga
Dhererkaagu intuu dhanyahay? Kalkaalisada caafimaadka waxaa ay cabiri doontaa inta uu dhererkaagu noqdey. Marka la cabirayo dhererkaaga waxaa la isticmaali doonaa qalabka lagu cabiro dhererka ee kaaga muuqda sawirka (mätsticka). Waxaa loo baahanyahay in aad is toosiso muddo yar oo kooban inta la fiirinayo inta uu dhererkaagu yahay.
Ku socota dadka waaweyn:
Kalkaalisada caafimaadka waxaa ay miisaami doontaa misaanka ilmaha isla markaana waxaa la cabari doonaa dhereka ilmaha mar kasta oo ilmuhu soo booqdu rugtad daryeelka caafimaadka dhalaanka, si loo arko sida uu yahaya koritaanka ilmuhu.
Waxaa lagu siin doonaa talaal, kaas oo kaa difaaci doona cuduro badan. Waxaa dhici karta in aad dareento woxoogaa xanuun ah iyo in meesha lagaa talaaley woxoogaa adkaato, laakin si dhakhso leh bey kaaga baab’i doontaa. Muddad lagu talaalayo waxaa aad ku fadhiisan kartaa dhabtaa waalidkaaga. Marka talaalku dhamaado waxaa lagugu dhejin doonaa sharooto ama balastar.
Kulanka booqashada waxaa la siin doona talaalka lidka ku ah gawracatada, teetanada, xiiqdheerta, dabeysha. Inta badan waxaa talaalka la iska siiyaa gacanta. Haddii adiga ama ilmaahaagu aad dareentaan wax welwel ah waxaa aad la soo xidhiidhi kartaan kalkaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC ka hor booqashada.
Inta aynaan kala tagin ka hor, muddo yar oo koobna ayaan sheekeysan doonaa. Inta badan kulankani waa kulankii ugu danbeeyey ee lagu imaan doon rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC. Mar aad bilowdo dugsiga waxbarashada waxaa aad la kulmi doontaa kalkaaliso kale oo caafimaad oo ka shaqeysa dugsiga waxbarashada.
Inta badan kulankani waa kulankii ugu danbeeyey ee uu ilmahaagu ku imaan doon rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC ka hor inta uusan billabin dugsiga waxbarashada. Kulankan waxaa aad ka hadli doontaan arimo ku saabsan sida ay ahayd booqashooyinkii aad ku iman jirteen rugta daryeelka caafimaadka dhalaanak. Iyo macluumaadka ay u baahantahay in ay ka ogaato ilmahaaga kalkaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa dugsiga uu ilmahaagu bilaabi doono.
Hadda kulankii booqashadu wey inoo dhamaatey.
Haddii aad dareento in aad u baahantahay isla markaana aad rabto waxaa aad qabsan kartaa balan ka hor inta uusan ilmuhu bilaabin dugsiga waxbarashada.
Halakan ka akhri macluaad dheeri ah oo ku saabsan booqashada rugta daryeelka caafimaadka BVC (svenska)
Halkan ka akhri macluumaad dheeri ah oo ku saabsan barnaamijka talaalaka ee loogu talogaley carruurta iyo loogu diyaar galoobi karo talaalka hortiis (svenska)
Halkan ka akhri macluumaad ku saabsan koritaanka carruurta ay da’doodu u dhaxeyso 5-6 sano (svenska)
Halakan ka akhri macluaad dheeri ah oo ku saabsan cuntooyinka carruurta (svenska)